के हो दादुरा ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७४, १ आश्विन आईतवार ०४:२१ मा प्रकाशित
एक लाख बिरामीमध्ये चार जना जतिलाई यो रोग निको भइसके पनि केही समयपछि इन्सेफलाइटिस हुने सम्भावना हुन्छ । -डा. गुणनिधि शर्माइपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
भाद्र ३१, २०७४-नेपाललगायत दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै बालबालिकाको मृत्युको एउटा कारक हो– दादुरा । यस्तो गम्भीर रोगबाट छुटकारा पाउने उपाय भने गाह्रो छैन । बालबालिकालाई समयमा जम्मा दुई मात्रा खोप लगाउन सके उनीहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ ।
दादुराका कारण वर्षेनी विश्वव्यापी रूपमा अझै १ लाख ३४ हजार २ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने अनुमान छ । यीमध्ये ५४ हजार ५ सय बालबालिका दक्षिण–पूर्वी एसियाका हुने गरेका छन् ।
‘दादुराको खोप दुई मात्रा लगाए पनि यसको प्रभावकारिता लगभग शतप्रतिशत हुन्छ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), दक्षिण–पूर्वी एसिया कार्यालय, फयामिली हेल्थ, जेन्डर एन्ड लाइफ कोर्सका निर्देशक डा. पेम नामग्याल भन्छन् ।
यसबाट बच्नका लागि दादुरा, रुबेला (मिजिल्स रुबेला/एमआर) खोप वा दादुरा, रुबेला मम्प्स (मिजिल्स, रुबेला मम्प्स/एमएमआर) खोप दुई मात्रा लगाउनुपर्छ । पहिलो मात्रा खोप लगाउँदा दादुरा संक्रमणविरुद्घको क्षमता ८५ प्रतिशत र दोस्रो मात्रा लगाउँदा १०० प्रतिशतसम्म पुग्ने डा. नामग्याल बताउँछन् ।
हालै दक्षिण–पूर्वी एसियाका ११ मुलुकमध्ये भुटान र माल्दिभ्सले दादुरा रोगलाई आफ्नो देशबाट उन्मूलन गरेको बताएका छन् । नेपालले पनि सन् २०१९ सम्म यो रोगबाट छुटकारा पाउने रणनीति
डब्लूएचओ, दक्षिण–पूर्वी एसियाकी निर्देशक डा. पुनम खेत्रपाल सिंहका अनुसार, सन् २०२० सम्म यो क्षेत्रबाट दादुरा उन्मूलनका लागि सबै राष्ट्रले बालबालिकामा दादुरा खोप लगाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा वार्षिक रूपले ४७ लाख बालबालिका दादुराविरुद्घको खोपबाट वञ्चित रहने गरेको उनी बताउँछिन् ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रेश्वर महासेठ दादुराको पहिलो खोप ९ महिनामा र त्यसपछि एमआर/एमएमआर खोप १५ देखि १८ महिनामा लगाउँदा धेरै फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।
खोप नलगाएका बालबालिकाहरू जीवनभर दादुराबाट ग्रस्त हुने सम्भावना हुन्छ । पछि रोग जटिल भई मृत्युसम्म हुन सक्छ र खोप नलगाइएका बालबालिका सधैं यसको जोखिममा हुन्छन् । खोप नलिएका गर्भवती महिलासमेत यो संक्रमणको जोखिममा हुन्छन् । यति मात्र नभई, कुनै पनि कारण वा रोग आदिले गर्दा शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरू, दादुरा खोपले शरीरमा काम नगरेकाहरू
समेत सधैं यो संक्रमणको जोखिममा हुन्छन् ।
ज्वरो आउनुभन्दा एक दिन अघिदेखि नै संक्रमित व्यक्तिले रोग सार्न सक्छ । शरीरमा बिमिरा आएको पाँच दिनसम्म रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
दादुराको संक्रमण भएर निको भएका व्यक्तिहरुलाई बाँकी जीवनभर यो संक्रमणले दोहोर्‍याएर छुँदैन ।
दादुराको कुनै विशेष एन्टिभाइरल उपचार छैन । यो रोगका कारण हुने कडा जटिलताहरुलाई सहयोगी उपचार, स्याहारका माध्यमले कम गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
भिटामिन ए को खुराकले दादुराबाट हुने मृत्युलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउने देखिएको छ ।
यो अत्यन्त संक्रामक भाइरसले गर्दा हुने रोग हो । यो रोगले सामान्यत: बालबालिकालाई बढी प्रभावित गर्छ । यो साना बालबालिकामा हुने मृत्यु र विकलांगताको समेत प्रमुख कारक हो ।
डब्लूएचओका अनुसार, कडा रूपमा देखिने दादुरा कुपोषित बालबालिका र शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकालाई बढी हुने गर्छ ।
उच्च कुपोषण र पर्याप्त स्वास्थ्य स्याहारको कमी भएको जनसंख्यामा दादुरा मृत्युको १० प्रतिशतसम्म कारक हुन सक्छ ।
गर्भावस्थामा दादुराबाट संक्रमित भएका महिलाहरू यसका कारण समयपूर्व प्रसूति, गर्भपतनजस्ता जोखिममा हुन्छन् । दादुराको संक्रमण भएर निको भएका व्यक्तिहरूलाई बाँकी जीवनभर यो संक्रमणले दोहोर्‍याएर छुँदैन । अर्थात्, उनीहरू दादुराप्रतिरोधी हुन्छन् ।
दादुरा प्यारामिक्सो भाइरस परिवारको एउटा भाइरसले गर्दा हुन्छ । यो रोग खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । मुखबाट वा श्वासप्रश्वासका माध्यमबाट निस्किने पानीका ससाना कण (ड्रपलेट) ले यो रोग अरू स्वस्थ व्यक्तिमा फैलाउने गर्छन् ।
दादुरा रोगीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क वा हावाका माध्यमले फैलिन्छ । रोग प्रभावित व्यक्तिको नजिक भइरहने वा खकार/थुक/सिँगानको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनेहरूलाई यो संक्रमण हुन सक्छ । दादुराको भाइरसले सास नलीलाई संक्रमित गर्छ । यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ ।
इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डा. गुणनिधि शर्माका अनुसार, ज्वरो आउनुभन्दा एक दिनअघिदेखि नै संक्रमित व्यक्तिले रोग सार्न सक्छ । शरीरमा बिमिरा आएको पाँच दिनसम्म रोग सर्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
दादुराको सामान्य लक्षण हो– तीव्र ज्वरो । यो ज्वरोको सुरुआत दादुरा भएकाहरूको सम्पर्कमा आएको १०–१२ दिनपछि सुरु हुन्छ र ४ दिनदेखि एक सातासम्म रहिरहन्छ ।
दादुराले छोएपछि थकान, रुघा–खोकी हुने गर्छ । आँखा राता हुने, मुखभित्र सेतो दाग देखिने हुन सक्छ । केही दिनपछि सामान्यत: अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा बिमिरा देखिन्छ । बिमिरा तीन दिनपछि फैलिन्छ र हात खुट्टामा समेत देखिन थाल्छ । यस्तो बिमिरा पाँच–छ दिनपछि आफैं फोस्रिँदै जान्छ ।
दादुराले निकै सताउँदै गए फोक्सो, कानको बीच भाग, मस्तिष्कमा समेत समस्या हुन थाल्छ । उपचार नभए अन्तत: रोगीको मृत्युसम्म हुन सक्छ ।
डब्लूएचओका अनुसार, यो संक्रमणले हुने जटिलता पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र २० वर्ष माथिकाहरूमा देखिन्छ । अन्धोपन, इन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर), कडा झाडापखाला, कानको संक्रमण, निमोनिया, सास नली र फोक्सोको नलीमा संक्रमण दादुराको सबैभन्दा गम्भीर जटिलता हो । एक लाख बिरामीमध्ये करिब चार जनालाई यो रोग निको भइसके पनि केही समयपछि इन्सेफलाइटिस हुने सम्भावना रहने डा. शर्मा बताउँछन ।
डब्लूएचओका अनुसार, दादुराको कुनै विशेष एन्टिभाइरल उपचार छैन । यो रोगका कारण हुने कडा जटिलताहरूलाई सहयोगी उपचार, स्याहारका माध्यमले कम गर्ने प्रयास गरिन्छ । राम्रो पोषण, पर्याप्त तरल पदार्थ सेवन र शरीरमा देखिएको पानीको कमीलाई जीवनजल (ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट) का माध्यमले उपचार गरिन्छ । जीवनजलले पखाला र वान्ताका कारण शरीरबाट निस्किएको तरल पदार्थको परिपूर्ति गर्छ । आँखाको संक्रमण र निमोनियाको उपचार गर्न एन्टिबायोटिकसमेत दिइन्छ ।
विकासशील मुलुकमा दादुरा पहिचान गरिएका सबै बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ को दुई मात्रा २४ घण्टाको फरकमा खुवाउनुपर्छ । भिटामिन ‘ए’ को खुराकले दादुराबाट हुने मृत्युलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउने देखिएको छ । -कान्तिपुरबाट